शरीरमा कसरी लाग्छ क्यान्सर ? सावधान ! कतै हामीले यी गल्ती गरिरहेका त छैनौँ ? - परिकल्पना - PARIKALPANA
गृहपृष्ठ / जानकारी / शरीरमा कसरी लाग्छ क्यान्सर ? सावधान ! कतै हामीले यी गल्ती गरिरहेका त छैनौँ ?
by परिकल्पना on Thursday, October 07, 2021 in जानकारी
बदलिदो जीवनशैली तथा गलत खानपानका कारण शरीरमा विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने गर्छ। यसको मुख्य कारण भनेको अस्वस्थ्यकर खानपान तथा बदलिदो जीवनशैली नै प्रमुख हो। आश्चर्यजनक के छ भने, ९० प्रतिशत मानिसको मृत्यु क्यान्सर रोगको कारण नभई उपचारको क्रममा मृत्यु हुने गर्छ । त्यसैले, निकै सावधानीपूर्वक यसको उपचार जरुरी छ।
क्यान्सर एक प्रकारको प्राणघातक रोग हो। क्यान्सरबाट पिडित विरामी सपिजलै ठीक हुँदैनन्, किनकी यस रोगको लक्षण ढिला पत्ता लाग्छ। र, संसारमा क्यान्सर रोगको स्थायी उपचार अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । समय रहँदै यस रोगको उपचार सही तरिकाले नभएको खण्डलाई यसलाई रोक्न मुश्किल हुन्छ।
शरीरमा कसरी हुन्छ क्यान्सर ?
शरीरमा हजारौको संख्यामा खराब कोशिका हुन्छन्। प्रत्येक सेकेन्डमा नयाँ कोशिका पैदा हुन्छ र पुरानो खराब कोशिका नष्ट हुन्छन्। तर क्यान्सर भएमा रातो तथा सेतो रक्तकोषिको सन्तुलन विग्रन थाल्छ। र, कोषिकाको विकास अनियन्त्रित रुपमा भएर क्यान्सरको रुपमा परिणत हुन्छ।
क्यान्सरका प्रकार ?
क्यान्सर चार प्रकारको हुन्छ ।
सारकोमा क्यान्सर - यो रगत तथा हड्डीसित सम्बन्धित हुन्छ ।
कार्सिनोमा क्यान्सर - यो छालासित सम्बन्धित हुन्छ ।
लिम्फोमा क्यान्सर - लिम्फोमा नामक क्यान्सर ग्रन्थीसित सम्बन्धित हुन्छ ।
ल्यूकेमिया क्यान्सर - स् रगत बनाउने कोशिकाको क्यान्सरलाई नै ल्यूकेमिया क्यान्सर भनिन्छ ।
क्यान्सर हुनुको कारण
-मादक पदार्थको सेवन : जस्तै, खैनी, सुर्ती, पान, मसाला, विडी, चुरोट, मदिरा इत्यादी ।
-खानपान : जस्तै, चिल्लो तथा वोसोयुक्त खानेकुराको सेवन, अत्याधिक मात्रामा नुनको सेवन, पचाउन समय लाग्ने खानेकुराको सेवन, ज्यादा समय एकै ठाउँमा बसेमा ।
-मोटोपना, हेपाटाइटिस बी तथा एचआईभीको भाइरसका कारण ।
महिलामा क्यान्सरको हुनुको कारण :
- नवजात शिशुलाई आमाको दूध नपिलाए, गर्भनिरोधक चक्कीको अत्याधिक प्रयोग ।
- महिनावारी पश्चात्त काखी वा स्तनमा गाँठो देखिनु ।
- स्तनमा कुनै किसिमको बदलाव देखिनु वा खाल्डो पर्नु ।
- मुखभित्र छाला पर्नु, मुख सोरिनु तथा पूरा नखुल्नु
- खाना खान, चपाउन, निल्न तथा पचाउन समस्या हुनु
- कम्मरमा सदैव पिडा महसुस हुनु
- पिसाबमा रगत आउनु, पिसाबको समय बदलिनु
- लगातार खोकी लाग्नु, आवाज सुक्नु तथा खकारमा रगत देखिनु
- स्तन तथा शरीरको कुनै अंगमा गाँठागुठी देखिनु
- शरीरमा रगतको कमी हुनु,
- एनिमियाको समस्या हुनु
- प्रोस्टेट परीक्षणमा असामान्य नतिजा आउनु
- रजनोवृत्तिमा समेत रगत आउनु
कसरी बच्ने क्यान्सरबाट रु घरेलु उपचार
- पान, सुपारी, चुरोट, लगायतका कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने ।
- प्रशस्त मात्रामा फलफूल तथा हरियो साजसब्जीको सेवन गर्ने ।
- कागती, सुन्तला तथा मौसमको जुस पिउने ।
- गाईको मुत्र, गहुँको जमरा क्यान्सर रोगको उपचारमा रामवाण मानिन्छ ।
- कुनै पनि रोगमा आवश्यकता अनुसार मात्र औषधीको सेवन गर्ने । अनावश्यक औषधी नखाने ।
- बदाम, किसमिस लगायतका ड्राई फ्रुट्सको सेवनले क्यान्सर रोग फैलिदैन ।
- नुनको प्रयोग कम गर्ने, नियमित एक्सरसाइज गर्ने ।
- धेरै मानिससित यौन सम्पर्क राख्नाले पनि क्यान्सर रोग लाग्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
- चिल्लो खानेकुरा खानबाट बच्ने ।
- ग्रीन टीको सेवन क्यान्सर रोगको उपचारमा लाभदायक मानिन्छ ।
- क्यान्सर भएमा दूध, दही लगायतका डेरी प्रोडक्टको प्रयोग नगर्ने ।
- क्यान्सरका रोगीहरुमा बेसारको प्रयोग लाभदायक छ ।
- गहुँ लगायतका मिश्रति आटाको प्रयोग फाइदाजनक छ ।
- आलु, बैगुन, अरबी खानबाट परहेज गर्ने ।
- कलौंजीको तेल तथा अंगूरको रसलाई मिलाएर दिनमा तीन पटक सेवन गर्ने , लसुन खाने
- सकेसम्म अर्गानिक तथा प्राकृतिक वस्तुको प्रयोग गर्ने ।
- रातो निलो, पहेलो तथा व्याजी कलरको फलफूल तथा साजसब्जी जस्तै, जामुन, टमाटर, मेवा, कालो अंगूर, अम्बा, तरबूजा खानाले क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ ।
क्यान्सरमध्य पनि सर्वाभाइकल क्यान्सरबाट बच्नका लागि एक प्रकारको खोप बजारमा उपलब्ध छ । यो छ महिनाभित्रमा तीन पटक लगाउन सकिन्छ । एघार देखि चालीस वर्षका महिलालाई लगाइन्छ, जसले गर्दा महिलाहरुमा क्यान्सरको खतरा कम हुने गर्छ। मुख सम्बन्धि समस्यामा उपयोगी बबुल स् बबुलको डाठँ वा पत्ता मुख तथा आमाशयको क्यान्सरमा विशेषरुपले लाभदायक मानिन्छ। एक अनुसन्धानका अनुसार यसको पत्तामा कयौप्रकारका क्यान्सररोधी तत्व पाइन्छ । तर पिरो हुनाका कारण यसले शरीरको मटाबोलिज्मलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।
त्यसैले, काडा बनाउँदा यसको पत्ताको सट्टा यसको डाठँको मात्र प्रयोग गरिन्छ। पत्तामा रहेका विभिन्न तत्वको फाइदा लिनका लागि विशेषज्ञ यसको पत्तालाई पानीमा उमालेर कुल्ला गर्न सल्लाह दिन्छन्। जसले गर्दा मुखमा रहेको किटाणु नष्ट हुने गर्छ।
पुनर्नवाका पञ्चाङ्ग सबै प्रकारको क्यान्सरका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। अझ रक्त क्यान्सरका विरामीको लागि विशेष लाभदायक मानिन्छ। औषधीको रुपमा यसको पञ्चाङ्ग ९फल, फूल, पत्ता, त्यान्द्रा, जड० को रस, काढा वा चूर्णको रुपमा प्रयोग हुने गर्छ। पञ्चाङ्ग बजारमा पनि सजिलै उपलब्ध छ। यसको पत्ताको तरकारी बनाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ।
विधा # जानकारी
✍️ परिकल्पना on Thursday, October 07, 2021
खाली पेटमा कालाे चिया पिउनुका यस्ता छन् फाइदा चियाका किसिममा हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नै रुची हुन्छन् , कसैले दूध राखेको चिया पिउन रुचाउँछन् भने...